एमसीसी तथा टिफा एकसाथ लागू गर्नुपर्छ
काठमाडाैं । वि.सं. २०५४ साल अर्थात् सन् १९९६ जनवरीमा भारतको कोलकातामा अमेरिकी लगानी मञ्चको बृहत्तर शिखर सम्मेलन भएको थियो । “अमेरिकी लगानी र उदीयमान पूर्व” मूल मर्म रहेको सम्मेलनको उद्देश्य नेपालको जलस्रोत विकासमा अमेरिकी लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गर्नु थियो । यो अमेरिकाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा देश बाहिर भएको सबैभन्दा ठूलो लगानी मञ्च थियो ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा २१ जना प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । जसमा ‘नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कमर्स’ले पनि भाग लिएको थियो । त्यस्तै, अमेरिकी लगानी मञ्चको तर्फबाट अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री विलियम डालीले ३५ जनाको नेतृत्व गरेका थिए । २२ वर्ष पहिले भएको उक्त शिखर सम्मेलनको प्रमुख बहस जलविद्युत तथा ऊर्जामा अमेरिकी लगानीलाई आकर्षित गर्नु नै थियो ।
वाणिज्य मन्त्री डालीले दक्षिण एसियामा अमेरिकी लगानीका लागि आवश्यक सर्त, औचित्य तथा रणनीतिक सम्भावना सार्वजनिक गरेका थिए । तर, सम्मेलनको उद्देश्य अनुसार काम अगाडि बढ्न सकेन । र, अमेरिकी लगानी भित्र्याउने महत्त्वपूर्ण अवसर थाँती रह्यो ।
सन् १९९५ मा दक्षिण एसियाली मुलुक भ्रमण गर्ने क्रममा बहुचर्चित अमेरिकी सिनेटर हिलारी क्लिन्टन रोद्धमको नेपाल भ्रमण भयो । ‘नेपाल रणनीतिक लगानीयुक्त संवेदनशील र सुन्दर राष्ट्र रहेछ’ भनी उनले प्रशंसा गरेकी थिइन् । नेपालमा अमेरिकी लगानी बढी सुरक्षित रहेको टिप्पणी पनि गरेकी थिइन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्र नेपालको समेत आर्थिक राजनैतिक मामिला नियाल्ने मन्त्री क्रिष्टिना रोक्का, विदेश मन्त्री कोलिन पावेल लगायत व्यक्ति नेपाल भ्रमणपछि लागनी गर्ने आशामा थिए । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुश स्वयं नै ऊर्जा विकासका लागि कुनै पनि हालतमा पछि पर्न नहुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
“नेपाललाई रणनीति बनाउनुपर्छ” भन्ने बहससँगै अमेरिकी काँग्रेसका ७ जना सिनेटरले सिनेटमा दस्तावेज नै पेस गरेका थिए । यसपछि, सन् २००५, नोभेम्बरमा सोही भावको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समेत भएको थियो । विदेश मन्त्री राइसलाई पत्र लेखी नेपाललाई रणनीतिक लगानी केन्द्रविन्दु बनाउन अमेरिकाले दबाब पनि दिएका थियो ।
नेपालसँगको कुटनीतिक सम्बन्धको आधारमा महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहयोग पुर्याउन अमेरिकालाई साथ दिन सक्ने साझेदार राष्ट्रहरू बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल, यूरोपियन यूनियन, स्केन्डनेभियन राष्ट्रको चासोलाई समेत मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ । रसिया र चीन बाहेक विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) बेलायत र अमेरिकाको निर्देशनमा चलेका छन् भने एसियाली विकास बैंक (एडिबी) जापानकाे प्रभुत्वमा चलेको छ ।
नेपाल विश्व बैंक, एडिबी र संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य हो । अमेरिकी विदेश विभाग अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (युएसएआइडी) ले नेपालको विकासको चाहानालाई साथ दिइरहेको छ । नेपालको विकास नीतिका प्राथमिकता अनुरूप अमेरिकी सहयोगको अधिकतम सदुपयोग हुने क्षेत्रहरूमा उसले सहयोग गरिरहेको छ ।
नेपालको गरिबी र पछौटेपनसँग जुध्न संसदीय अनुमोदन पर्खिरहनु पर्दैन । धनी र गरिब छुट्ट्याउने मापदण्ड संसद हुन सक्दैन । राज्यको नियम कानुनको अधिनमा रहेर स्वतन्त्र प्रगति गर्ने मौलिक हक सबै धनी–गरिबमा निहित छ । नेपालको गरिबी र पछौटेपन ऊर्जाको लागि पूर्वाधार नभएर गरिबी र असमानता बढेको हो ।
विशेष गरी कृषि उत्पादनमा बृद्धि, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, नीति तथा कानुनी सुधार, एकीकृत ग्रामीण विकासमा अमेरिकी सहयोग आइरहेको छ । यूएसएआइडी मार्फत सञ्चालन भएका अन्य कार्यक्रम जस्तै, सिआरसी कम्पनी, राप्ती विकास परियोजना, कर्णाली विकास परियोजना (केवर्ड), पेट्रोलियम अन्वेषण, एकीकृत जलाधार संरक्षण आयोजनालाई भने निरन्तर गति दिन नसकेको देखियो ।
मध्य तथा सुदूरपश्चिम गरिबीतिर धकेलियो र त्यही सेरोफेरोबाट माओवादी आन्दोलन सुरु भयो । गैरसरकारी तवरबाट परिचालन भएका अमेरिकी आइएनजिओ प्याक्ट, एसिया फाउन्डेशन, सेभ द चिल्ड्रेन, मेरिनोल (मानसिक अस्पताल) मा सहयोग पुगेको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा अमेरिकी आँखा परेको अमेरिकी स्वयं सेवक संघ (पिसकोर) माओवादी द्वन्द्वकालको कारणले निस्क्रिय जस्तै छ ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डीबेरी पिसकोर अन्तर्गत नेपालमा नेपाली जनजीवनबारे ज्ञाता मानिन्छन् । नेपाल र छिमेकी मुलुकको विभिन्न परिस्थिति बुझेका कारणबाट नेपालमा राजदूत नियुक्त हुनु भयो । बहुदलीय व्यवस्था पछि नेपाल र अमेरिकाबीच आर्थिक कुटनीतिक प्रयासमा शिथीलता आयो । प्रजातन्त्रको सुदृढिकरण, मानव अधिकार, महिला शसक्तिकरण, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण, कानूनी शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, समारिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षण आदी क्षेत्रमा चासोको साथै लोकतन्त्र र शुसानमा अमेरिकाले जोड दिँदै आएको छ ।
यूसएआइडी मार्फत निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले विद्युत विकास विभागको अगुवाईमा केही आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन निर्देशिका लागु गर्ने गरी ६ जलविद्युत आयोजना प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिइएको थियो । यसका लागि (International Resource Group, IRG) ले परामर्श गरेको थियो । ती आयोजना आर्थिक अभाव र अधिकतम क्षमता बृद्धि हुँदा निर्धारित तालिका अनुसार निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् ।
यसैगरी, प्रसारण लाइनतर्फ सबस्टेसनको स्तरोन्नती गरी सार्क राष्ट्रमा विद्युत (पावर पुलिङ) सन्जाल तयार गर्न US Agency for International Development, -South Asia Regional Energy Forum SARI/E, CORE International Inc. जस्ता अमेरिकी परामर्श संस्था खडा भएका थिए । वैदेशिक लगानीबाट सञ्चालित ३६ मेगावटको तर जडित क्षमता ४५ पुर्याइएको भोटेकोसीमा अमेरिकी कम्पनी HARZA/Panda र नेपालकाे Tara Management Soaltee समूहको संयुक्त लगानीमा उत्पादन भइरहेको छ ।
नेपाल भू–मण्डलीकरणको छायामा परिसकेको अवस्थामा एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्नु हितकर देखिन्छ । चाहे इन्डो–प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी होस् चाहे बिआरआई वा बिम्स्टेक नेपालका लागि चालिने द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र कुटनीतिक चातुर्याईबाट देशलाई फाइदा पुर्याउन जरुरी छ ।
उक्त आयोजना नेपालको उत्तरपूर्वी जिल्ला सिन्धुपाल्चोकस्थित चाइनाको सीमा नजिक छ । यस जलविद्युत केन्द्रको शतप्रतिशत अमेरिकी डलरमा ३६ मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्झौता भएको थियो । तर, थप ९ मेगावाटको बिक्री दर प्राधिकरणले भुक्तानी दिन नमान्दा विवाद भएको थियो । विवादका कारण नेपालबाट अमेरिका निकासी भइरहेको तयारी पोशाकको कोटा बन्द भयो । यो विवाद अमेरिकी काँग्रेससम्म पुगेको थियो ।
अमेरिकी प्रसिद्ध ऊर्जा कम्पनी एनरोनले १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनामा लगानी रणनीति बनाएको थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेर त्यत्तिकै तुहियो । यस्तै, विश्व बैंकको सहुलियत ऋणमा निर्माण हुने भनिएको अरुण तेस्रो समेत तुहियो । अरुणलाई छुट्ट्याएको रकम फिर्ता लान नमिल्ने भनेकोले सो रकम ऊर्जा विकास कोष (Power Development Fund- PDF) खडा गरी निजी क्षेत्रका आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय भएको थियो ।
उक्त रकम हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) ले निर्माण गर्ने काबेली–ए मा लगानी गर्ने सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । झन्झटिलो कार्यविधि र लामो प्रक्रियाले सम्झौता भएको रिडी हाइड्रोले हात झिक्नुपर्यो । नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको झन्डै सात दशकअघिको आर्थिक सम्झौताको सट्टा नयाँ लगानी तथा व्यापार सम्झौता (टिफा) गर्ने सहमति भयो । त्यो सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन । यो विषय US Investors Interested in Hydropower, seek liberal labor law and end of instability Nepal, US to sign new trade pact April 9, 2010, April 8 in Republica, Washington April7मा उल्लेख छ ।
एमसिसी रणनीति के होला ?
उल्लेखित ऐतिहासिक विश्लेषणबाट नेपाललाई आधार मानेर दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभावलाई सुनिश्चित गर्न एमसिसीलाई अगाडि सारेको बुझ्न सजिलो छ । एमसिसी पनि रणनीतिकभित्रकै एउटा पाटो हो । नेपाल भू–मण्डलीकरणको छायामा परिसकेको अवस्थामा एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्नु हितकर देखिन्छ । चाहे इन्डो–प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी होस् चाहे बिआरआई वा बिम्स्टेक नेपालका लागि चालिने द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र कुटनीतिक चातुर्याईबाट देशलाई फाइदा पुर्याउन जरुरी छ ।
अब नेपाल संरक्षित, सुरक्षित र समृद्ध हुन जरुरी छ, समर्पित होइन । राष्ट्रवाद सबै नेपालीलाई प्यारो हुने शब्द हो । राष्ट्रवादको नाउँमा दुःख दरिद्र गरिबी–उन्मुख हुनु भएन राष्ट्रवादमा समृद्धि आउनुपर्छ, कि मागेर खान पर्यो, कि गरेर । यसैले, आप्mनो राष्ट्रको अस्तित्व जगेर्ना गर्ने गहन विषयको अवसर पाउँदा पनि दश र देशबासीको जीवनस्तर माथि उकास्ने वातावरण मिलाउन नसक्दा सरकार र दलहरू दोधारमा परेका छन् ।
जहाँसम्म एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ, केही बुँदाका अंकुशलाई पुनः छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारपक्षका दलको भनाइ छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट, मिलेनियम च्यालेन्ज को–अपरेशन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टको दस्तावेजमा एमसिसीका सर्तमा विरोधाभाषका चर्चा चुलिरहेको छ । उल्लेखित ४ शीर्षकमध्ये नेपालले पाउने अनुदान र सो अनुदान कुन शीर्षकमा केका लागि लगानी हो भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
एमसिसीका अधिकारीहरूका अनुसार एमसिसी नेपालमा मात्र लागू भएको होइन । नेपालका लागि लागू गरिएका अनुदान कम्प्याक्ट अन्तर्गत नपरेर कर्पोरेशनमा पार्नुपथ्र्यो । विश्वव्यापी गरिबीसँग जुध्न अमेरिकाको वैदेशिक सहायता एजेन्सीको सहयोग एमसिसी हो भने नेपाल आफैंमा अति कम विकसित राष्ट्रको दाँजोमा छ । पूर्वाधारमध्येको पनि पूर्वाधार जलविद्युत तथा ऊर्जालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । एमसिसी कम्प्याक्टबाट प्राप्त हुने अनुदानमा संसदीय अनुमोदन भनिएको छ ।
एमसिसी सम्झौतामा देशभित्र र बाहिर प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक स्तरोन्नती गर्ने उल्लेख छ । नयाँ प्रविधिलाई सहयोग पुग्ने यो पक्ष स्वागतयोग्य छ । यसबाट नेपाललगायत वैदेशिक लगानीका निजी क्षेत्रको पनि स्तरोन्नती हुन जरुरी छ । निजी क्षेत्रको सडक, पूर्वाधार, प्रसारण लाइनको अभावबाट धेरै आयोजना अलपत्र छन् । एमसिसीको अनुदान ५ वर्षमा खर्च गर्न सकिन्छ, उपलब्धि हासिल हुन कठिन छ । यसैले, निजी क्षेत्रका आयोजनाको संवेदनशीलता (कोर एरिया) हेरेर आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । यसमा एमसिसीको अनुदान पुर्याउन जरुरी पनि देखियो ।
अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन भारतको सीमासम्म पुर्याउने सवालमा भारतको सहमति केका लागि भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि, भारतको सहमति लिने हो भने नेपालको प्रसारण प्रणालीबाट आदान–प्रदान हुने विद्युत अविच्छिन्नरूपमा दुवै देशले विद्युत खरिद बिक्री दर तोक्ने गरी एमसिसीको सर्त संशोधन गरिनुपर्दछ । निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित २३ हजार मेगावाटका आयोजना वित्तीय अभावका कारण जटिल स्थितिमा पुगेका छन् । एमसिसीले ती आयोजनाको हकमा समेत सरल ऋण तथा अनु्दानमा सहयोग पुर्याउन सकोस् । गरिबीसँग जुधिरहेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको खाँचो छ । यसो हुँदा एमसिसीको उद्देश्य बढी प्रतिफलमुखी हुन सक्छ ।
संसदीय अनुमोदन र प्रतिपक्षको भूमिका
सरकारको तर्फबाट असोज १२, २०७६ एमसिसी कार्यक्रम कार्यान्वयन (पिआइए) सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको उल्लेख छ । उक्त कार्यक्रम नीति तथा बजेट कार्यक्रम संसदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा फेरि संसदबाट अनुमोदन हन जरुरी छ या छैन पुनरावलोकन हुन जरुरी छ । अर्कोतर्फ, सरकारबाट उपलब्ध हुने १३ करोड डलर बजेट विनियोजित भइसकेको छ । उक्त रकमबाट एमसिसी सञ्चालन खर्च चलिरहेको कुरा प्रकाशमा आएको हो ।
संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भने रणनीतिक साझेदारीबाट नेपाललाई सुरक्षित र घेरामुक्त राष्ट्र (बफर स्टेट) को रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ । योसँगै सार्वभौम अक्षुण तथा स्वतन्त्र अविभाज्य मुलुकको पंक्तिमा राख्ने गरी छलफल चलाउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । अनुदान तथा लगानीको दायरा बढाउँदै न्यूनतम सर्त सर्वमान्य हुने गरी संसदीय छलफल चलाउन पनि अपरिहार्य छ ।
इन्डो–प्यासिफिक स्ट्र्याटेजीको सवालमा अमेरिकाले नेपालको ठूलो लक्ष्यलाई ठूलै सहयोग दिएर सहयोग पुर्याउने हो भने प्रसारण लाइनमा मात्र होइन निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनामा पनि यस्तो सहयोग आउनुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्रले अनुमतिपत्र लिएर विभिन्न चरणमा रहेका २३ हजार मेगावाटका आयोजना छन् । उता सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्दा एमसिसीको ५० करोड डलर करिब २०० मेगावाटका आयोजना मात्र निर्माण हुन सक्छन् । जलविद्युतका लागि यो ज्यादै कम रकम हो । यत्ति सानो रकम संसदबाट किन अनुमोदन गरिरहनुपर्यो ? जलविद्युतका लागि सहुलियत तथा सरल प्रक्रियाको ऋण वा अनुदान, आन्तरिक तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका स्रोतबाट जुट्नुपर्ने हुन्छ ।
ऊर्जा तथा पूर्वाधार एवं विविध क्षेत्रमा आउन सक्ने ऋण वा अनुदानको लागि संसदबाट पास हुनुपर्ने विषयले नेपाललाई पक्कै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । तथापि, नेपाल विश्व ध्रुविकरण तथा भू–मण्डलीकरणको चपेटामा पर्नबाट जोगिन र जोगाउनपर्ने समयमा सम्बद्ध राष्ट्रहरूको रणनीतिक चासो बढेकाले, नेपाल सामरिक सैन्य गठबन्धन मुद्दामा प्रवेश गर्न सक्दैन ।
अमेरिकासँग भएको टिफा र भारतसँग भएको विप्पा तथा चाइनाको विप्पा प्रस्तावमा भएको लगानी र व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा पुग्न त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपाल–रसिया कुटनीतिक सम्बन्ध ऐतिहासिक र अविस्मरणीय रहेकाले उसको चासोलाई समेट्न पनि उतिकै जरुरी छ । अनिमात्र, नेपालको अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तोरन्नती हुन सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा पुग्न सघाउ पुग्छ । यसका लागि प्रतिपक्षको भूमिका अत्यावश्यक छ ।
भण्डारी, निजी जलविद्युतका प्रवर्द्धक तथा अभियन्ता हुन्, (E-mail: krishna_hydro@hotmail.com)